शरीरमा यस्ता १० संकेतहरू भएका मानिसहरू हुन्छन धेरै धनी !! | सुदुरपश्चिम खबर
कुण्डली मार्फत, ग्रहहरू र राज योगको चाल सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। जहाँसम्म, धेरै थोरैलाई थाहा छ कि शरीर योगको आधारमा राजा योग फेला पार्न सकिन्छ। भविष्य बारे शरीरको बनावटका आधारमा पनि जान्न सकिन्छ ।यस्तो आधारमा जान्ने यस विधिलाई समुद्र शास्त्र भनिन्छ। समुन्द्र शास्त्रको भरण ग्रन्थ, शरीरको वनावटमा आधारित, बताउँछ कि कुन मानिस धनी बन्न सक्ने क्षमता छ र कसको होइन। यसको बारेमा आज जानकारी दिँदै छौ ।
समुद्र शास्त्रका अनुसार मानिसहरु जसको छाती फराकिलो, नाक लामो र नाभी गहिरो छ, उनिले सानै उमेरमा धेरै सफलता पाउँछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सजिलैसँग तिनीहरूको सबै सपनाहरू पूरा गर्छन्। यी व्यक्तिहरूसँग रकमको अभाव छैन र यी व्यक्तिहरू प्रायः सम्पत्तीका मालिक नै हुन्छन् ।जसको खुट्टामा कर्ब, कुण्डल वा चक्रका निशानहरू छन्, तिनीहरू एक असल शासक, ठूला व्यापारी, अधिकारी वा राजनीतिज्ञ हुन्छन्।
यदि औंठामा यावाको संकेत छ भने, त्यो व्यक्ति धनी छ। यदि औंलाहरूको चाँड लामो छ, भने ती व्यक्ति भाग्यशाली र दीर्घायु हुन्छ। धनी मानिसहरुको हात लाइनहरु स्पष्ट र गहिरो हुन्छन्, जबकि पैसा को अभाव संग संघर्ष गर्ने मानिसहरुको हात लाइनहरु धेरै हल्का हुन्छन्।मकर, झण्डा, घर र मन्दिरको संकेत जस्तो विशेष लाइनहरू भएको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति महाधनी हो। यदि हातमा चक्र, तलवार, फरसा, तोमर, शक्ति, धनुष र भाला जस्तो देखिने लाइनहरू छन् भने मूल निवासीले सेना वा पुलिसमा उच्च ओहदा लिन्छ।
तिनीहरूको हातमा इग्ग्निया, देवमन्दिर वा त्रिकोण भएको मानिस स्वभावैले धार्मिक छ। औंलाको जरामा मोटो रेखाहरूलाई छोराहरू मानिन्छन् जबकि सूक्ष्म रेखाहरू केटीहरूको रूपमा मानिन्छन्। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सबै शुभ चिन्हहरू जसले राजयोग बनाउँदछन् महिलाको देब्रे भागमा र पुरुषहरूको दाहिने भागमा हुनुपर्दछ । (gnewsnepal बाट सभार)
बिर्सिएर पनि यस ठाउँमा कहिल्यै नरोप्नुहोस् तुलसी, घरमा अशुभ र धन नाश हुन्छ !!